Equip.li - Kubatsira vafundisi shanduko panguva yeCOVID-19
Dzokera kunonyanya kufamba
Mienzaniso yakakodzera yechechi yepamhepo
Maitiro ekumisa yako vhidhiyo
Mataure sei kamera yevhidhiyo
Mazano ekushandisa Android foni kurekodha vhidhiyo
Ndeipi midziyo yemavhidhiyo yatinofanira kushandisa?
Zvepamutemo mimhanzi sarudzo
Mhinduro uye kugadzirira
Ungazivisa sei online-chete chechi yekushandira
Inobatsira webhusaiti zvinongedzo
Vhidhiyo yemazano rondedzero
Shumiro isina internet
Makadi Memory emafoni
Kukurudzira vanamati vekunamata
Ushumiri hwepamhepo kuvana, pwere, uye vabereki
Post-Svondo AM yekunamatira timu
Zvishandiso zvekugadzirisa manzwiro
Fona script yemakereke
Rugwaro rwevafundisi panguva yeCOVID-19
Mariro dzimwe nzira
Kupindura kune anti-mask chinyorwa
Ongororo yeanopikisa-masasi echinyorwa # 2
Kubatsira vafundisi shanduko panguva yeCOVID-19
Zano ramufundisi-kuna-mufundisi (# 01)
Ndakatumira vhidhiyo iyi mumapoka akati wandei mandiri nevashumiri. Ini ndinoona kuti havasi vese vangu vehushumiri hweshumiro vari mumapoka iwayo, saka ndiri kugovera pano zvakare.Sarudza izvi uye tambidza wako mufundisi. Zvichamukurudzira. Matanho mapfumbamwe ekubata neizvi pachako anokubatsira, kunyangwe usiri mufundisi. Ingomhanya kumberi kusvika paminiti gumi neminana. Ndanga ndichishanda pane rangu rinotevera bhuku (kunyangwe ini ndisati ndiine muparidzi). Iko kuchave kwekutevera kusvika kune "Kubatsira, ini ndiri kuChira" - nezano rinoshanda kune vatungamiriri. Ndanga ndichivharira zvitsauko uye ndichiita zvekunyora kwekutanga.Pandakanyora chitsauko ichi nezvekutungamira munhamo, ndakafunga kuti handifanirwe kumirira kugovera kusvikira bhuku rabudiswa. Panzvimbo iyoyo, ndakafunga kuzvidzidzisa pavhidhiyo.Zviri izvi - pasina chero kurambidzwa kwemvumo. Wokutanga maminitsi gumi nematanhatu pfungwa (kusanganisira mbiri dzandinodaidza kuti "nhamba 13") nezvekutungamira chechi yako.The ekupedzisira maminetsi gumi nematanhatu anotarisana nezano revanhu zvekuita nekushushikana uye nekumanikidza. Ini ndinogovana zvinhu 13 zvandiri kuita kuti ndigare ndakagwinya, ndiri mushe uye ndizvozvo kuburikidza nedambudziko iri. Ndinonamata izvi zvichikubatsira. Kana iwe uine mifungo kana mibvunzo, pindura pazasi.ZVINZVIDZISO: Ini handisi nyanzvi. Ndiri kubata nemanzwiro ese akafanana uye kudzvinyirira kwauri. Ini ndinongoitika kunge ndiri kunyora bhuku apo ini ndiri kubata naro. Iyi ipfungwa kubva kune mumwe munhu ari kunetseka.Tichaita izvi kuburikidza - izvi pamwe!
Posted by Rod Loy neChitatu, Kubvumbi 1, 2020
Iwe haugone kuendesa dambudziko. Taurirana zuva nezuva.
Sarudza Distant yekupedzisa mutsara. (sarudzo dzinosarudza kubva panobvumirwa nenyika kuenda 2022)
Sarudza inononoka kumhanya.
Bata kamera kunge munhu (akasurukirwa, akanamira kumba); paridza kune kamera.
Dzidzira kushandira utariri. (cheka mitengo pese pamunogona.)
Batanidza nevanhu vechechi. Fona parunhare.
Funga kwenguva refu. Ndeapi maitiro atinofanira kuumba? unoda kuputsa?
Dambudziko rinouya kunyangwe kana uri munhamo.
Tsvaga Yekunze Kunze. (Govera chikafu. Misangano, Mufambo unamate, kana zvimwe)
Mufundisi Rod Loy vanobva vashandisa chikamu chechipiri chevhidhiyo (nenguva dza 13:00 mamaki) vachinyora kuti ndeapi maitiro amubatsira kurarama munguva ino yeCOVID-19 (hutachiona hweCorona).
Filed Under: Kukurudzira kuraira kuvashumiri
Iyi ndiyo mhinduro yezvikamu zvean anti-mask chinyorwa "Vane hutano Vanopfeka Masks, Vanofanira Kana Ivo Kana Kusadaro?" naPatricia Neuenschwander (mukoti anoshanda), rakanyorwa naJennifer Margulis, PhD (muChirungu) Kutanga nenyaya dze… [Enderera kuverenga] nezve Ongororo yeanopikisa-masasi echinyorwa # 2
Mumagariro madiki kure mapoka
Dzimwe hurumende dzinoisa muganho pane kuti vanhu vangani vangasangana. (eg. kwete vanopfuura vanhu gumi). Saka chero chechi inesarudzo yekubvumira chero munhu muchechi yavo kusangana mumisangano midiki yeboka iri. Misangano midiki iyi yaizoda kuve nevanhu mukati… [Enderera kuverenga] nezveSocial kure kure mapoka madiki
Uku ndiko kupindura kwezvikamu zveRichard Blaylock's anti-mask zvinyorwa, ine mazita anobva ku "Face Masks Kuisa Zvakakomba Njodzi Kuenda Kune Hutano" kana "Nzvimbo Masks Inogona Kufa Kune Vane hutano Anoti Neurologist" Ndiani Russell Blaylock? Haasi… [Enderera kuverenga] nezve Kupindura kune anti-mask chinyorwa
Dzimwe hurumende hadzibvumire kuungana kwemariro. Heano mamwe maitiro: Drop-off kenduru taa wake Kudonha-kure kenduru wake wake. kunobva Izvi zvinokutendera iwe kuve nemhemberero yehupenyu hwehupenyu pasina kupwanya zvakakosha denda kuchengeteka ... [Enderera kuverenga] nezvesarudzo dzeMariro
Kutangazve mukuvaka-chechi dzechechi
Vamwe vatungamiriri vehurumende vakatanga kubvumira machechi kusangana mukuvaka. Iwe unogona kuda kugovera sarudzo iyi nenhengo dzedare dzekuti uye sei kudzokerana sachechi muchivako chako. Dzvanya pane iyo mishanu mibvunzo kuongorora izvo zvakanaka uye… [Enderera kuverenga] nezve Kutangisa mukuvaka-chechi dzechechi
Tsvaga iyi webhusaiti
Chechi kuburikidza nevhidhiyo yepamhepo
Shumiro kuvanhu vasina internet
Rugwaro re: COVID-19
Mavhidhiyo kuburikidza ne Android
Gadzira vhidhiyo yako
Taura kune kamera
Mhinduro | Kuronga
Vhidhiyo Idea Rondedzero
Mapoka ari kure
Vana, pwere, uye vabereki
Dzokera kumusoro kwepepa
Copyright © 2020 · Kwayedza.li by Evhangeri Memory Makadhi · Sitemap · Log in